Faah Faahin: Weerar Gaadiid Lagu Gubay Askarna Lagu Dilay Oo Ka dhacay Duleedka Buurhakabo.
Wednesday November 29, 2017 - 20:09:48 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta gelinkii dambe ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Buurhakaba iyo Baydhabo ee gobolka Bay.
Dagaallada ayaa yimid kadib markii ciidamada Ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ay weerar dhabbagal ay u dhigeen kolonyo gaadiid ah oo la yimid magaalada Baydhabo kunasii jeeday Buurhakaba.
Wariye ku sugan gobolka Bay ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in dagaalka oo ay barbar socdeen qaraxyo khasaara dhimasho iyo dhaawac ah lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed.
Nin sarkaal ciidan ah oo magaciisa lagusoo gaabiyay (kaarabiin) ayaa la xaqiijiyay in dhaawac culus uu kasoo gaaray dagaalka halka warar soo baxaya ay sheegayaan in guddoomiyaha Buurhakaba uu dhaawacmay.
Ilo wareedyo ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyay in gaari NOAHA ah lagu gubay qarax lala helay ciidamo kasoo gurmaday dhanka dhanka degmada Buurhakaba halka ciidamada Al Shabaab ay u suurtagashay in ay gacanta ku dhigaan gaari ay la socdeen ciidamada dhanka Baydhabo ka yimid.
Weerarka khasaaraha badan dhaliyay ayaa ka dhacay meel ku dhow deegaanka Mooda Moode oo uu maro laamiga isku xira magaalooyinka Buur-hakaba iyo Baydhabo.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay Mas'uuliyadda weerarkan ka dhacay gobolka Bay wuxuuna weerarkan imaanayaa xilli R/wasaaraha DFS Xasan Cali Kheyre uu dhowaan booqasho ku tagay magaalada Baydhabo.